बहस शिक्षाको- बालबालिकालाई पढाउने कि सिकाउने ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:04:15
जापानी समय : 06:19:15
बहस शिक्षाको- बालबालिकालाई पढाउने कि सिकाउने ?
10 May, 2019 15:18 | बिचार | comments | 82800 Views
नेपालको विद्यालयतहको शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा अनेक विवाद भए पनि मापनका आधार खोजिएको छैन । कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर आम अभिभावकले पाउन सकेका छैनन् र उनीहरुमा एउटा भ्रम छ– अंग्रेजी बोल्न सक्ने भए मात्र गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ ।
अहिलेको मूल बहसको केन्द्र यही हो । के अंग्रेजी बोल्न जान्नु वा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु नै गुणस्तीय शिक्षाको मापन हो वा विद्यार्थीहरुलाई किताबका पाठ घोकाएर र सोही अनुसारको प्रश्नको उत्तर लेखाएर दिएको धेरै नम्बर नै गुणस्तर हो ? अब चल्नुपर्ने बहस भनेको विद्यार्थीलाई पढाउने कि सिकाउने भन्ने हो । तर यस दिशातिर सम्बन्धित कसैको पनि ध्यानाकर्षण भएको छैन ।
विद्यालय तहको शिक्षाबाटै भविष्यको निर्धारण गर्दछ । हामीले हाम्रा बालबालिकालाई विद्यालय तहबाटै घोक्ने हैन कि सिक्ने अभ्यास गराउन सक्यौं भने त्यो नै उसको शिक्षा हुन्छ । किताब पढेर त्यसको अभ्यास हुन पाएन भने त्यो शिक्षाको कुनै मूल्य हुँदैन । आजको शिक्षा विदेश पलायनको ‘लाइसेन्स’ भएको छ ।
सकी नसकी बोर्डिङ पढायो, एसईई परीक्षापछि विदेश पठाउने तारतम्य मिलायो । अहिलेको शिक्षा यही हो । यस्तै मान्यताले गर्दा बालबालिकामा पनि सिकाईभन्दा नम्बर कसरी धेरै ल्याउने भन्ने चिन्ता बढी हुन्छ जसको परिणाम उसले पढछ मात्र केही सिक्दैन । अब मुलुकमा सिकाई आवश्यक छ पढाई हैन । पढ्नु र सिक्नुमा धेरै फरक छ भन्ने कुरा नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ताहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
आजभोलि सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर उकास्न भन्दै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई गर्ने होडबाजी चलेको छ । यसलाई सरकारले पनि ठूलो क्रान्ति ठानेको छ । हुन पनि अंग्रेजी माध्यमका निजी विद्यालयहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजीमा पढाउनुपर्ने सुझाव कथित बुद्धिजीवीहरुको रहँदै आएको छ । तर त्यस्ताले के बुझेनन् भने अंग्रेजी मात्र एउटा भाषा हो र त्यो भाषा जान्दैमा मान्छे विद्वान बन्दैन ।
नेपाल शैक्षिक क्षेत्रमा गर्वलायक समय थियो केही दशक अघिसम्म । विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा नैतिकता, सामाजिक मूल्य–मान्यता र व्यावसायिक सीपहरुको विकास गर्ने गरी पठनपाठन गरिन्थ्यो । तर आजभोलि अंग्रेजीले खाएको छ सबै शिक्षा र व्यवहारलाई । अझै पनि अंग्रेजीकै भूत सवार छ सबैमा । दाताको स्वार्थ अनुसारको शिक्षा नीति बन्दा कुनै समय एसियाकै १० उत्कृष्ट मध्येमा पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय धराशायी भयो ।
यो देशमा शिक्षकहरू नै शिक्षामन्त्री भए तर शिक्षा क्षेत्रमा यिनीहरूले कुनै योगदान दिएनन् । उल्टै पटकपटक शिक्षामन्त्री बनेकाहरूले शिक्षा निजीकरणका नाममा प्रयोग गरेका नीतिगत सन्दर्भले शिक्षा कोरा व्यापारिक वस्तु बन्यो । सामुदायिक शिक्षण संस्थाको अवमूल्यन र गिर्दो स्तरका साथै प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको महिमा र मूल्य मान्यता समेत धराशायी भयो । विद्यालयका शिक्षकदेखि विश्वविद्यालका प्राध्यापकहरु समेत नेताका झोले बने, पार्टीका कार्यकर्ता बने । अनि विद्यार्थीले के सिक्छन् ? के पढ्छन् ?
शिक्षालाई व्यापारको क्षेत्र बनाइयो, करको दायरामा ल्याइयो, परिणाम शिक्षा नाफामूलक व्यवसाय भयो । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म भएको निजीकरणले २०१६ सालमा स्थापना भएको कुनै बखतको एसियाकै दशौं उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बन्न पुगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज कहाँ पुग्यो । विश्वका दुई दर्जन बढी मुलुकका ७० भन्दा बढी विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धन स्थापना गरेर कीर्तिमान कायम गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्नुपर्ने थीति बस्यो जसको परिणाम आज मुलुकको उच्च शिक्षाले भोगिरहेको छ ।
शिक्षा समाज विकासको आधार हो र शिक्षाले पढाउने हैन सिकाउनुपर्छ । पुस्तकको आलुले तरकारी पाक्दैन, तरकारी पकाउन आलु खेती गर्नुपर्छ र आलु फलाउने शिक्षा देशका लागि आवश्यक छ । यस्तो शिक्षा विगतमा थियो । मानिसलाई संस्कारी, गुणकारी, नैतिकवान र देशभक्त बनाउने शिक्षा पूर्वीय शिक्षा पद्धतिको थियो र त्यस्तो शिक्षाको जग नेपाल नै थियो । तर आज पूर्वीय मान्यताहरु सबै भत्काएर आयातित शिक्षा, संस्कृति थोपरिएको छ । पञ्चामृतको साटो ‘होली वाइन’ सेवन गर्न थालिएको छ ।
एउटा व्यक्तिलाई तब मात्र शिक्षित वा पढेखेखेको मानिन्छ जब उसले आफै गरिखाने बन्न सक्छ र उसमा राम्रो संस्कार बस्छ, आफ्नो धर्म, संस्कृति, मूल्य–मान्यतामा आस्था राख्ने हुन्छ । किनभने शिक्षाले त्यही सिकाएको हुन्छ । तर यहाँ त मात्र पढाइन्छ । हाम्रो जीवनशैलीको पूर्वाधार नै संस्कार हो । शुभकर्म गर्नु, आत्मबोध गर्नु, साक्षी भावले जगतमा विचरण गर्नु सवै संस्कारजन्य काम हुन् । शुभकर्म गर्न जसरी संस्कारले प्रेरित गर्छ त्यसरी नै सुसभ्य, सुसंस्कृत हुन, सुशिक्षित बन्न, सुख, शान्ति प्राप्त गर्न पनि सुसंस्कारकै बलियो जग चाहिन्छ । यस्तो शिक्षा पिता–पिर्खाबाट हस्तान्तरण हुँदैआएको थियो । तर आजभोलि हराएको छ । आज आधुनिक शिक्षाका ज्ञाता र नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरुले पनि आफ्ना बुबा–हजुरबुबाबाट त्यस्तो शिक्षा नपाएका हैनन्, तर उनीहरुमा द्रव्यमोहले यति ग्रस्त पारेको छ कि केही रुपैयाँका लागि आफ्नो संस्कार बन्धकी राख्न पछि हट्दैनन् । यस्तो भएपछि देशमा कहाँबाट हुन्छ शुभकार्य ?
असल संस्कारका निमित्त प्रतिदिन प्रार्थना गर्न सानै उमेरदेखि प्रेरित गर्ने पद्धति थियो । बुढापाकाहरूको दिनचर्या त्यही थियो । यसलाई पीढी शिक्षा भनिन्थ्यो । ‘भद्रंकर्णेभि श्रुणुयाम देवा’ जस्ता उपनिषद्का मन्त्रहरूका साथै प्रतिदिनजस्तो गरिने यज्ञ–यागादिका स्वस्तिवाचन लगायतका मङ्गलगान पीढी शिक्षा अन्तर्गत पर्छन् । बाल्यजीवनमै यस्ता मङ्गलगान आफ्नै घरभित्रै सुनेर सुसंस्कृत र सुसंस्कारले युक्त हुने जीवनशैलीको विपरीत आज जेजस्तो शिक्षा प्रदान भैरहेको छ यसले मात्र अक्षर चिन्ने बनाएको छ, संस्कारी बनाएको छैन । आज त्यस्तो वातावरण पनि छैन । सिक्ने कला बदलिएको छ । झलुङ्गोमै सुतेको शिशु र आगनमा खेल्दै उफ्रिदै गरेको बालक वा जिज्ञासु किशोरवयका सवैले आफ्नै प्रकारको अन्तरंग घरेलु वातावरणमा देखेर, सुनेर सिक्ने वा शिक्षित हुने गर्दथे । आजभोलि यन्त्रको सहाराले आयातित जीवनशैली र शिक्षाको बढावा छ ।
अब बालबालिकालाई पढाउने मात्र हैन कि सिकाउने काम नगर्ने हो भने नेपाल अक्षर चिन्नेहरुले त भरिनेछ तर गरिखान सक्ने कोही हुँदैनन् । सबै परतन्त्रमा आश्रित भएर जीवन गुजार्न बाध्य हुनेछन् । अहिले हरेकको मनमा गढेको “म यहाँ बस्ने हैन क्यारे किन सिक्नुपर्यो, किन जान्नु पर्याे, यहाँ सिकेको कुरा त्यहाँ के काम ?” जस्ता प्रश्न गर्दछन् । यही हो पैसामा किनिएको संस्कारविहीन पढाई । अब यसको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
आवश्यक छ सदाचारी-सुसंस्कारी बनाउने शिक्षा